म त्यस्तो प्रविधिमा विश्वास गर्छु जसले हाम्रा दैनिक क्रियाकलापलाई सहज र जिन्दगीलाई सजिलो बाटोतर्फ डोर्याधउँछ। प्रविधि जीवनका लागि हुनुपर्छ। म्याग्दीको नांगी गाउँमा परीक्षण गरिएको बेतारे प्रविधिकबाट दुर्गम गाउँहरुमा इन्टरनेट पुर्यागउने प्रयासको सफलताले मेरो विश्वासलाई सार्थक र जिन्दगीलाई सफल बनाएको छ। सुखी र सुशिक्षित जिन्दगीको खोजीमा किशोर बेलाको कुनै एक दिन चटक्क छोडेर हिँडेको गाउँमा वर्षौंपछि […]
स्टिभ जब्सलाई दृढ विश्वास थियो अहिले बाँचेका हरेक विन्दूहरु भविष्यमा कतै न कतै गएर जोडिन्छन्। र अहिलेको जीवन हिजोका विन्दूहरूको समष्टि हो। त्यही भएर उनको जीवन कहिलै कसैले भविष्यवाणी गर्ने किसिमको भएन। जन्मनासाथ आमाले उनलाई अर्कैलाई सुम्पिदिइन्। एक सेमेस्टर पढेपछि स्टिभले कलेज छोडे। २१ वर्ष पुग्दा उनले आफ्ना पिताको ग्यारेजमा एप्पल कम्पनी सुरुवात गरे। कुनै […]
काम ही करना हे ना
14. Aug, 2011 1 Comment
शारीरिक फुर्तिको कुनै सीमा छैन। स्लिम हुन त ठाउँ बाँकी नै के थियो र तै पनि तौल घटेको अनुभव भइरहेछ। नहोस् पनि किन ! झन्डै ६ महिनादेखिको एउटा योजनाबद्ध सदाचारयुक्त प्लेन लाइफ ! अनि त्यहीँमाथि केही दिनयताको एक पटक मात्र थोरै खाना-खाजा र कडा कागतीपानीको खाना ! स्पेसल परिणाम अनुभव गरिरहेछु- फूलजस्तो चंगा दिमाग र […]
साथी पनि बडो अजिब अजिबका अनुभव गर्छु। कोही सिम्पल देखिनका सौखिन छन्। कोही बजारमा आएको नयाँ पर्फ्युम ब्रान्डको नाम कण्ठ गरेकोमा गर्व गर्नेहरु। अनि कोही चाहिँ जब इन्टरभ्युमै सोझै भन्छन्- ‘तिमीले मागेको एक वर्षे अनुभव प्रमाणपत्र म नक्कली पनि बनाउन सक्थेँ। कामका लागि काबिल भए अवसर देउ नभए तिम्रो जब तिमीलाई नै भयो।’ अनि कोही […]
हिजै देखिको एउटा पीडा के को हो भन्नेमा म आफैँ अलमलमा छु। कतै गएको बेला बाहेकको मेरो संसार बन्ने मेरो कोठाले पनि आज विरक्त पारेको छ। खै कुन जाँगरले हो कुन्नि यस्तो असहज अवस्थामा पनि अफिस पुग्न सकेँ। सधैँ न्युजसँग खेल्दा आनन्द लाग्थ्यो। आज कम्प्युटर नजिकै गएर बस्नै पनि मन लागेन। आराम कक्षको एसी अफ […]